Bakka bu'aa Taalibaan walgahii irratti, Osloo, Noriwaay, Amajjii 24, 2022
Jilli Taalibaan kan eeggataa ministeera haajaa alaa biyyatti Amiir Muttaqiin hogganaman fi bakka buutonni hawaasa sivilii Afgaanistaan Dilbata kaleessaa guyyaa guutuu Osloo keessatti marii kan gaggeessuun beekamee jira.
Mariin kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa Afgaanistaan keessaa kan ilaaleen ture.Hirmaattonni marii kanaa obsaan kan wal dhaggeeffatan akksumas yaada wal jijjiruu isaanii, walgahii kana eega xumuramee booda ibsa Taalibaan baasee hubachisee jira.
Rakkoo Siyaasaa, dinagdee, nageenyaa fi badhaadhiina Afgaanistaan keessaaf lammiwwan biyyatti martii hirmaachuu qabu jedha ibsii Taaliibaan.
Mariin kun jalqabbii walgahii guyyaa sadii kan cufataan gaggeeffamuuf jiru, Noorweey qindeessite garee kan mootummaaAfgaanistaan bulchaa jiru, aangawoota mootummoota gama dhiyaa fi lammiwwan Afgaanistaan kanneen hawaasa sivilii adda addaa dabalata jedhameera.
Jilli Taalibaan Awuroopaa ennaa seenuu kun yeroo jalqabaa ti.